နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ရောဂါနှင့် ကမ္ဘာ့အလုပ်အကိုင်ကဏ္ဍဆိုင်ရာ ILO ကမ္ဘာ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေး ကာလအတွင်း ကျင်းပသည့် ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များနေ့ အခမ်းအနားတွင် ဗီဒီယိုဖြင့် မိန့်ခွန်းပြောကြား | NLD
Home State Counsellor နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ရောဂါနှင့် ကမ္ဘာ့အလုပ်အကိုင်ကဏ္ဍဆိုင်ရာ ILO ကမ္ဘာ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေး ကာလအတွင်း ကျင်းပသည့် ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များနေ့ အခမ်းအနားတွင် ဗီဒီယိုဖြင့် မိန့်ခွန်းပြောကြား
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ရောဂါနှင့် ကမ္ဘာ့အလုပ်အကိုင်ကဏ္ဍဆိုင်ရာ ILO ကမ္ဘာ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေး ကာလအတွင်း ကျင်းပသည့် ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များနေ့ အခမ်းအနားတွင် ဗီဒီယိုဖြင့် မိန့်ခွန်းပြောကြား
Posted By: mygate wayon: ဇူလိုင် 09, 2020 In: State Counsellor, State Counsellor Gallery, State Counsellor News
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် သည် ယနေ့ Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့(ILO)၏ COVID-19 ကူးစက်ရောဂါနှင့် ကမ္ဘာ့အလုပ်အကိုင်ကဏ္ဍဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကာလအတွင်း ကျင်းပသည့် ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များနေ့ အခမ်းအနားတွင် ဗီဒီယိုဖြင့် မိန့်ခွန်းတစ်ရပ် ပါဝင်ပြောကြား ခဲ့သည်။
အဆိုပါ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များနေ့ အခမ်းအနားတွင် ILO ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Mr. Guy Ryder က သဘာပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်လျက် အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပြီး၊ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူး ချုပ်၊ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် ILO အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ၅၅ နိုင်ငံမှ နိုင်ငံအကြီးအကဲ၊ အစိုးရအဖွဲ့ အကြီးအကဲများက ဗီဒီယိုဖြင့် မိန့်ခွန်းများ ပြောကြားခဲ့ကြသည်။
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က မိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ရောဂါကြောင့် ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ၊ အလုပ်သမားများ အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးများအပေါ် ထိခိုက်မှုများကို ပြောကြားခဲ့ပြီး၊ အလုပ်သမားများ၏ ကျန်းမာရေးကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ဆက်လက်လည်ပတ်နိုင်ရေး ရည်မှန်းချက်နှစ်ရပ်တို့ကို ဟန်ချက်ညီညီအကောင်အထည် ဖော်ရန် လိုအပ်မှုကို အလေးထားပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ကိုဗစ်-၁၉ ကို တုံ့ပြန်ရေးအတွက် မြန်မာ အစိုးရ၏ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် စီးပွားရေး၊ အလုပ်အကိုင်ဈေးကွက်နှင့် အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများအပေါ် ထိခိုက်မှုများ လျှော့ချရေး ကြိုးပမ်းမှုများကို ထည့်သွင်းပြောကြား ခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ကိုဗစ်-၁၉ကို တုံ့ပြန်ရာတွင် ပြည်သူများ၏အင်အား၊ စေတနာ သဒ္ဓါထက်သန်မှု၊ လှူဒါန်းပေးကမ်းလိုသည့်စိတ်ဓာတ်တို့ကို ရယူကာ “တစ်နိုင်ငံလုံး ပါဝင်သည့် ချဉ်းကပ်မှုပုံစံ” ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်အတွက် ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို ယနေ့ထိ ထိန်းချုပ်ထားနိုင် ခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် ပြည်ပနိုင်ငံများ၌ အခက်အခဲနှင့် ရင်ဆိုင်နေကြရသည့် မြန်မာ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအားလုံးကို မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်နိုင်ရန်နှင့် အလုပ်သမား လိုအပ်ချက်မြင့်မားသည့် စီမံကိန်းများကို ဖော်ဆောင်ကာ ၎င်းတို့အတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့် အလမ်းများ ဖန်တီးပေးနိုင်ရန် အစွမ်းကုန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ ထို့ပြင် မြန်မာ နိုင်ငံသည် ILO ၏ ရာပြည့်ကြေညာချက် (ILO Centenary Declaration) ပါ အကြံပြုချက်များ အထူးသဖြင့် အလုပ်သမားအခွင့်အရေးများ ကာကွယ်ရေးကိစ္စကို လိုက်ပါဆောင်ရွက်ရန် သန္နိဋ္ဌာန်ချ ထားကြောင်းနှင့် ကိုဗစ်-၁၉ ကို တုံ့ပြန်ရာတွင် ILO မှ အကြံပြုထားသည့် အဓိကမဏ္ဍိုင်(၄)ရပ်ကို အခြေခံသည့် မူဘောင်အရ ဆောင်ရွက်နေကြောင်းတို့ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ကမ္ဘာ့အလုပ်အကိုင်ကဏ္ဍတွင် ရင်ဆိုင်နေရသည့် ဘုံစိန်ခေါ် မှုများကို တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက် ထိရောက်သည့် လက်တွေ့လုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ်ဆောင် ရွက်နိုင်မည့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု လိုအပ်ကြောင်း နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် အလေးထား ပြောကြားခဲ့သည်။
(နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၏ မိန့်ခွန်းအပြည့်အစုံကို သီးခြားဖော်ပြသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။)
နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိုလ္ကိုဗစ္-၁၉ ကူးစက္ေရာဂါနွင့္ ကမၻာ့အလုပ္အကိုင္က႑ဆိုင္ရာ ILO ကမၻာ့ထိပ္သီးအစည္းအေဝး ကာလအတြင္း က်င္းပသည့္ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားေန့အခမ္းအနားတြင္ ဗီဒီယိုျဖင့္ မိန့္ခြန္းေျပာၾကား
ေနျပည္ေတာ္ ဇူလိုင္ ၈
နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိုလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ သည္ ယေန့ Video Conferencing စနစ္ျဖင့္ က်င္းပျပုလုပ္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖဲြ့(ILO)၏ COVID-19 ကူးစက္ေရာဂါနွင့္ ကမၻာ့အလုပ္အကိုင္က႑ဆိုင္ရာ ကမၻာ့ထိပ္သီးအစည္းအေဝးကာလအတြင္း က်င္းပသည့္ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားေန့ အခမ္းအနားတြင္ ဗီဒီယိုျဖင့္ မိန့္ခြန္းတစ္ရပ္ ပါဝင္ေျပာၾကား ခဲ့သည္။
အဆိုပါ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားေန့ အခမ္းအနားတြင္ ILO ညွြန္ၾကားေရးမႉးခု်ပ္ Mr. Guy Ryder က သဘာပတိအျဖစ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ျပီး၊ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႉး ခု်ပ္၊ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖဲြ့ ညွြန္ၾကားေရးမႉးခု်ပ္နွင့္ ILO အဖဲြ့ဝင္နိုင္ငံ ၅၅ နိုင္ငံမွ နိုင္ငံအၾကီးအကဲ၊ အစိုးရအဖဲြ့ အၾကီးအကဲမ်ားက ဗီဒီယိုျဖင့္ မိန့္ခြန္းမ်ား ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။
နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိုလ္က မိန့္ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ကိုဗစ္-၁၉ ကူးစက္ေရာဂါေၾကာင့္ ထိခိုက္လြယ္အုပ္စုမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား အထူးသျဖင့္ အမို်းသမီးမ်ားအေပၚ ထိခိုက္မႈမ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့ျပီး၊ အလုပ္သမားမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္လည္ပတ္နိုင္ေရး ရည္မွန္းခ်က္နွစ္ရပ္တို့ကို ဟန္ခ်က္ညီညီအေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ လိုအပ္မႈကို အေလးထားေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို့ျပင္ ကိုဗစ္-၁၉ ကို တံု့ျပန္ေရးအတြက္ ျမန္မာ အစိုးရ၏ ၾကိုးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားနွင့္ စီးပြားေရး၊ အလုပ္အကိုင္ေဈးကြက္နွင့္ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ထိခိုက္မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရး ၾကိုးပမ္းမႈမ်ားကို ထည့္သြင္းေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ ကိုဗစ္-၁၉ကို တံု့ျပန္ရာတြင္ ျပည္သူမ်ား၏အင္အား၊ ေစတနာ သဒၶါထက္သန္မႈ၊ လႉဒါန္းေပးကမ္းလိုသည့္စိတ္ဓာတ္တို့ကို ရယူကာ “တစ္နိုင္ငံလံုး ပါဝင္သည့္ ခ်ဉ္းကပ္မႈပံုစံ” ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည့္အတြက္ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈကို ယေန့ထိ ထိန္းခု်ပ္ထားနိုင္ ခဲ့ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ား၌ အခက္အခဲနွင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည့္ ျမန္မာ ေရွြ့ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအားလံုးကို ျမန္မာနိုင္ငံသို့ ျပန္လည္ေခၚေဆာင္နိုင္ရန္နွင့္ အလုပ္သမား လိုအပ္ခ်က္ျမင့္မားသည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ကာ ၎တို့အတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္ အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးနိုင္ရန္ အစြမ္းကုန္ ၾကိုးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေၾကာင္း၊ ထို့ျပင္ ျမန္မာ နိုင္ငံသည္ ILO ၏ ရာျပည့္ေၾကညာခ်က္ (ILO Centenary Declaration) ပါ အၾကံျပုခ်က္မ်ား အထူးသျဖင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ေရးကိစၥကို လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ရန္ သနၷိ႒ာန္ခ် ထားေၾကာင္းနွင့္ ကိုဗစ္-၁၉ ကို တံု့ျပန္ရာတြင္ ILO မွ အၾကံျပုထားသည့္ အဓိကမ႑ိုင္(၄)ရပ္ကို အေျခခံသည့္ မူေဘာင္အရ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းတို့ကိုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိုလ္က ကမၻာ့အလုပ္အကိုင္က႑တြင္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ဘံုစိန္ေခၚ မႈမ်ားကို တံု့ျပန္ေျဖရွင္းနိုင္ေရးအတြက္ ထိေရာက္သည့္ လက္ေတြ့လုပ္ငန္းစဉ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ ရြက္နိုင္မည့္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ လိုအပ္ေၾကာင္း နိဂံုးခု်ပ္အေနျဖင့္ အေလးထား ေျပာၾကားခဲ့သည္။
(နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိုလ္၏ မိန့္ခြန္းအျပည့္အစံုကို သီးျခားေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။)